Didniin laga soo saaray shirkado internetka dadka ku khiyaana - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Kristin Nilsson, Radio Sweden
Didniin laga soo saaray shirkado internetka dadka ku khiyaana
La daabacay torsdag 27 november 2014 kl 16.31
Khiyaanooyinka dhanka internetka ayaa ah kuwo aad u sii xoogeysanaya sannooyinkan danbe. Heyadda kormerka maaliyada Finansinspektionen ayaa sidaas daaraaded ka digeysa shirkadaha been abuurka ah oo dhanka internetka dadka ugu baaqaya in lacagahooda ku maalgashadaan.
Sida xeer-illaaliyaasha iyo booliskaba laga soo xigtay maanta khiyaanooyinka intooda badan waxay ka dhacaan qadka internteka. Dacwadaha khiyaanooyinka noocan ah laga soo gudbiyo ayaa kor u ka cay kuwaas oo muddo saddex sanno horteed ahaa 14 000 oo dacwadood halka sannadka 2013kii noqdeen 24 000 oo dacwadood. Laakiin waxaa la maleynayaa in dadka loo geysto khiyaanooyinka internetka aynan dacwado ka wado sameynin khiyaanooyinka loo geysto. Khiyanooyinka ayaa kalo ahaan karaan afduub lagu sameeyo qofka koontadiisa iyo aqoonsigiisa ama in loo soo diro waraaqo qaan doon ah oo been abuur ah. Balse sidoo bariyahan waxaa soo badanaya khiyaanooyinka ku dhisan shirkado maalgashi oo ruuxa u ballan qaadaya faa’idooyin dhaqso ah:
Shirkadda xeyeysiinta ka danbeysa ayaa la yiraahdaa Superalerts Pro. Waxayna ka mid tahay shirkado cusub oo qaab casriya u qaabeysan kuwaas ujeedkooda keliya yahay si ay gacanta ugu dhigaan lacagtaada ayna ka digeyso hey’adda kormeerka maaliyadda. Waxaan keliye ee aad u baahan tahay ayuu lagu yeri xeyeysiiska in aad furato akoon macaash aadna ku shubta lacagta ugu yar ee la ogal yahay, ka bacdiina horey ayaad ka billaabeysaa macaash faa’idooyion badan leh, ayaa lagu yeri. Laakiin Pasel Assalum ayaa shaki ka muujiyey shirkada ka danbeysa xeyeysiiskan.
- Ma lahan meel lagalo xiriiro, mana lahan namber aqoonsi, ayuu yeri Pasel Assalum oo kormeere ka ah hey’adda kormeerka maaliyadda Finansinspektionen. Sannad kastaa Finansinspektionen waxay liiskeeda digniinta ku dartaa shirkado kor u dhaafaya 700 oo shirkadood, kuwaas oo u badan shirkado aan heysanin ogalaansho ganacsi ama kuwo aan gebi ahaantoodba jirin balse ah keliya magac u yaal meel loo raaco laheyn. Waxayna badanaa u badan yahiin shirkado been abuur ah oo dalka dibadiisa ka soo jeeda, sida shirkadan Superalerts-Pro. Bogga ay shirkaddan ku leedahay internetka waxaan ogaanay in uu ku qoran yahay luuqado badan oo kalo gedisan sida Af Danish, Isbanish, Polish iyo weliba af- talyaani. Xeyeysiinta shirkadaan oo afafkaan kalo geidsan ku qoran, haddana sawirada waa kuwo isku mid ah, sawiradaas oo muujinaya dad faraxsan oo faa’idooyin badan ka helay macaashkooda lacag faro badan soo gashay. Laakiin magacyada dadkan markas fiirisid waxaa kuu muuqaneysa in ay kalo gedisan yahaiin. Tusaale ruuxa Erika Hansson Sweden loogu waco waxaa Isbeyn loogu wacay Maria Fernandez, Poland loogu waco Petra Vanek.
- Waa khiyaanooyinka noocan ah kuwa aad u sii kordhaya, baadanaa isku ruux ayaa ka danbeeya laakiin shirkada magaca ayey u kalo badbadelaan, ayuu yeri.
Badanaa dadka ka danbeeyaa arrimahan khiyaanada ah ayaa ah dad ku xeel dheer arrimaha maalgashiga iyo ganacsiga. Waxay sameystaan bogag casri ah oo falso ah kuwaas oo loo ekeysiiyey in uu yahay mid la socda suuqa saamiga dhaqaalaha. Iyaga oo weliba dadka u sheegaya in shirkaddooda ay kontoroolsha hey’add dowli, balse been abuur ah. Sidaas daraaded waqti dheer ayey waqti ku qaadataa dhibanaha in uu ogaado qiyaanada loo geystey.
- Waay ogaadaan in loo geystey khiyaano maalgashi marka ay isku dayaan in ay galaan bogaga ay ku lahaayeen shirkada ayna ogaadaan in booga uu qadka ka baxay. In ay ogaadan middas ayey suurtogal tahay i9n ay ku qaadato ugu yaraan labo-saddex-afar sanno.
Sidaas daaraded ayey dhaci kartaa in tirada dadyowga arrinkan khiyaanada ha loo geysto in ay intaas ka badan tahay, qaar waabo ka xishoodaan in ay booliska ku dacweeyaan khiyaanadan marka ay ogaadan., sida uu yeri Passel Assalum.
Waxay dhaci karta in laga khiyaano lacag dhan 10 000 oo karoon illaa iyo shan- lix milyan. Inta badan waa lacago kor u dhaafaya 300 000 oo karoon. Dadka khiyaanada noocaan ah loo geysto aad ayey u xanuujisaa, uanna murugeysaa. Waxey dareemaan in ay ku dhacdey ceeb xun oo ku adag in ay sheegqan, ayuu yeri.